DEG DEG-Ajandihii kulankii maanta ee barlamaanka Puntland oo dib loo dhigay & kulankii oo soo xirmay.
Barlamaanka Puntland ayaa maanta xaadiray fadhigoodii 5aad eek al-fadhiga 47aad kadib markii barlamaanka la fasaxay muddo saddex cisho ah oo ay ku maqnaayeen dabaal degga dhalashada Nebiga NNKH.
Fadhiga maanta oo ay soo xaadireen 43 Xildhibaan, ayaa waxaa si rasmi ah u furay waxaa daahfuray guddoomiyaha barlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, waxaana uu soo bandhigay ajandayaasha kulanka maanta.
Intaas guddoomiye madaxeedyada joogtada ah ee barlamaanka ayaa codsaday in dib loogu dhigo soo jeedinta Warbixinnada Guddiyada illa maalinta maalinta berri ah ( November 01, 2020).
Ugu dambayntiina guddoomiyaha barlamaanka Puntland ayaa guud ahaan ugu baaqay shacabka Muslimiinta inay difaacaan sharafta Nabigenna suuban naxariis & nabadgalyo dushiisa ha ahaate, waxa uuna tilmaamay inay tahay wax aan la aqbali karin in meel looga dhaco sharafta suubanaheena NNKH.
SH MACOW says:
Beentii GAYLAN faaruq, waxba kama jiraan, shilamdii Farmaajo na way dhamaadaan
webkan waa la nacay, Gaylay faaruqoow waxmaka qabsatay lacagtii xaaraanta aad dadka ku caayi jirtay iyo balo sheegnimada
qoraagan xagee kala qaaday ma inadeerkaa baanu ka warmin oo amaanin mise adaaba xoolo doon ah oo baad raba
Waxuu kala qaaday in uu Faarax Gaylaan puntlaan ka sheego waxyaalo badan oo an wada ahayn suu u sheego.Faarax wax xun iyo been abuur kama sheego gobalada kale ee soomaaliweeyn,laakiin puntlaan waxba ulama haro.Kama wado yaan la sheegin qaladaadka madaxda puntlaan ee meesha ku suga mushaarada iyo laaluushka.Madaxdii an wax wanaaga ku soo kordhinayn dalka iyo dadkiisa waa in la sheegaa oo waliba la eryaa.Laakiin Faarax wax xun ka sheega puntlaan wuu ka bad-badiyey.